> Resource> Free> Top 5 Free AVI Video Editors
Naa dị iche iche ọkachamara video edezi ngwaọrụ nke na-enye ịtụnanya mmetụta na ikike dị na ahịa. Ma, ndị a video edezi ngwaọrụ nwere ike ịbụ oke ọnụ na ọ bụghị ezigbo ọrụ na onye-enyi na enyi. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ dezie ụfọdụ n'ụlọ fim, ndị omume agaghị nnọọ aka n'ihi na ị. N'ezie, anyị nwere ike ịhọrọ free na mfe video edezi software. A bụ ihe m họpụta mmadụ maka n'elu 5 free AVI video edezi software.
Windows Movie Mee
Windows Movie Onye kere bụ oké free video edezi na ngwá ọrụ Windows ọrụ. Ọ bụ ike aka dị iche iche video formats dị ka AVI, MOV, MP4, M4V, WMV na ndị ọzọ. Ọ nwere atụmatụ dị ka ikpuru-n-dobe arụmọrụ, ikwu n'ụzọ, utu aha, e si nweta, usoro iheomume akomako na ndị ọzọ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị pụrụ ọbụna gbanwee ẹdude mmetụta ọ bụrụ na ị nwere ihe ọmụma banyere iji XML koodu.
Avidemux bụ isi ma nnọọ ike video edezi usoro. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka AVI, MPEG, MP4 na ASF. Na ya, ị nwere ike mfe splice obere vidiyo ma ọ bụ tinye nzacha. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ụda dị nnọọ mfe, ọ bụ n'ezie siri ike iji na-hụ na gị na videos anya ọkachamara.
Virtualdub bụ a ọma-Mata video edezi ngwá ọrụ nke-enye gị weghara video na ịrụ video edezi. Ọ na-haziri maka kwupụta nhazi AVI faịlụ na ike ime a dịgasị iche iche nke tupu na post nhazi arụmọrụ na gị video. Na ya, i nwere ike ịgbanwe eku ọnụego, wepụ ọdịyo egwu, resize, bugharia, tụgharịa, kpatụ ìhè na iche na ndị ọzọ.
Lightworks bụ a free video nchịkọta akụkọ ma nwere ike ijikwa ọtụtụ ihe ị ga-atụ anya n'aka a ọkachamara video edezi ngwa. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats dị ka AVI, MOV, mpg na ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ya pụtara ìhè atụmatụ na-agụnye video kpọọ na mbubata, GPU- accelerated n'ezie na oge mmetụta, agba mgbazi, autosave na medoa management, ect.
ZS4 Video Editor bụ ihe ọzọ na free video edezi ngwá ọrụ na n'elu 150 wuru na-video mmetụta gụnyere magburu onwe na agba na chroma Keying. Ọrụ nwere ike hazie obosara na ịdị elu nke mmepụta video, tinye na-akparaghị ókè egwu na sub-composites, ohu mmetụta na mgbanwe, ikpegara njikwa ka audio-efegharị efegharị iche-iche na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ dị ike ma dị mfe na-eji video edezi ngwá ọrụ, azụmahịa video edezi ngwa dị ka Wondershare Video Editor ukwuu tụrụ aro. Ọ nwere ma Windows na Mac nsụgharị nke enyere gị aka dezie niile nkịtị video formats ịkọrọ na n'ụwa nile. Ebe i nwere ike ibudata na-agbalị ya.